बिग्रेको क्यामेरा भाडामा लगाएर चलचित्र क्षेत्रमा चरम ठगी, प्रेमगञ्ज र ‘म राजेश हमाल’ नै शिकार ! | Diyopost - ओझेलको खबर बिग्रेको क्यामेरा भाडामा लगाएर चलचित्र क्षेत्रमा चरम ठगी, प्रेमगञ्ज र ‘म राजेश हमाल’ नै शिकार ! | Diyopost - ओझेलको खबर
बिग्रेको क्यामेरा भाडामा लगाएर चलचित्र क्षेत्रमा चरम ठगी, प्रेमगञ्ज र ‘म राजेश हमाल’ नै शिकार !
दियो पोस्ट शुक्रबार, कार्तिक १९, २०७८ | १४:३१:१७
काठमाडौं । निर्माता र निर्देशक परिच्छेद सेन चलचित्र प्रेमगन्जको अन्तिम सेड्युलको तयारीमा थिए । उनको योजना अनुसार सोलुखुम्बुमा पाँच दिन र काभ्रेको नालामा पाँच दिन गरी १० दिनमा सम्पुर्ण छायांकन सम्पन्न गर्ने तयारी थियो । उनले अनामनगरको सिनेजोन स्टुडियोबाट १० दिनको लागि भनेर रेड ड्र्यागन क्यामेरा भाडामा लिए । तर, विडम्बना क्यामेराले पहिलो दिनबाटै छायांकनमा धोका दिन थाल्यो । क्यामेरामा न त भ्यु फाईन्डर नै चल्थ्यो न त क्यामेराको पूरा सेटप नै थियो । क्यामेराले फुटेज स्टोर कार्ड पनि जम्मा दुईवटा मात्र । छायांकन हुँदाहुँदै कार्ड सकिए एक दुई घन्टा कुरेर बस्नु पर्ने हुन्थ्यो ।
बिहान सात बजे देखि ११ बजेसम्म मात्र आकाश खुल्ने र काम गर्ने पाउने त्यस्तो हिमाली ठाउँमा जाबो कार्ड कपि हुनै एक घन्टा कुर्नु पर्ने भएपछि सिनेमाटोग्राफर सन्जय लामा दिक्क भएर बस्थे । अझ कुनै कुनै बेला त क्यामेराले कार्ड सपोर्ट नै गर्दैन थियो । खिच्दाखिच्दै बिचमा कार्ड ईरर देखाउथ्यो । खिचेको फुटेज पनि ड्रप भएर उड्थ्यो ।
सिनेमाटोग्राफरले बिचमा क्यामेरा फिर्ता गर्न पनि खोजेका थिए तर कबाडी सामान भाडामा लगाउँदै निर्माता लुट्न पल्केका सिनेजोनका क्यामेरा साहुले क्यामेरा फिर्ता गर्न मानेनन् । क्यामेरा फिर्ता भए पनि उनलाई पुरै १० दिनकै पेमेन्ट गर्नु पर्ने शर्त राखे ।
‘त्यत्रो ६० जनाको युनिट लगेर बसेको छ । सबैको टाईम लिमिट छ । केही दिनमा सबै कलाकार र प्राबिधिकलाई छोड्नै पर्ने छ । यहि कामेराको समस्याले गर्दा तीन दिन सेड्युल बढी सक्यो,’ ती निर्देशकले भने,‘अब यसले खिचे खिच्छ नत्र सबै ड्रोन क्यामेराले खिच्छु । १० दिनमा सम्पुर्ण छाँयाकन सम्पन्न गर्ने भनेर गएको युनिट सोलुको सेडुल पनि बल्ल सकियो । दिन पनि बढ्यो , चलचित्रको बजेट पनि बढ्यो , तर निर्माताको समस्या कसले बुझिदिने ।’
उता अर्को चलचित्र ‘म राजेश हमाल’ले पनि मल्टीमेट स्टुडियोबाट क्यामेरा लगेको थियो । उक्त चलचित्रमा त झन चार–चार पटक क्यामेरा बिग्रेको थियो । ४५ दिनको लागि बिरगन्ज पुगेको ‘म राजेस हमाल युनिट’ सेड्युल तहस नहस हँुदा ६५ दिन बस्नु परेको थियो ।
अहिले साधारणभन्दा साधारण एक नेपाली चलचित्रमा दैनिक तीन लाखको दरले खर्च भैरहेको हुन्छ । एक दिन बढ्दा पनि निर्मातालाई तिन लाखका दरले बजेटले थिच्दै जान्छ । ‘म राजेश हमाल’मा अनुमानित बजेट भन्दा झन्डै ८० लाख बढी बजेट निर्मातालाई भार परेको थियो भने ‘प्रेमगन्ज’ मा एक करोड बढी नै बजेट बढेको छ । काम ढिला हुने कारण जे भए पनि अन्ततः त्यसको सम्पुर्ण भार निर्माताथि नै पर्छ ।
यस्ता कम्पनिमाथि कारबाही हुनुपर्ने निर्माताहरुको माग छ ।
शुक्रबार, कार्तिक १९, २०७८ | १४:३१:१७